Khabiirka Kala Duwan: Maxaa Loogu Joojin Doonaa Wargeyska Google Spectrum Spam
Nik Chaykovskiy, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu xusuusinayaa in xogtu ay tahay astaamaha ugu badan ololaha internetka ee internetka . Inta badan milkiilayaasha boggaga iyo dadka ka shaqeeyaa waxay ku xiran yihiin xirfadaha wax qabadka xogta. Spam Google Analytics wuxuu keenaa gaadiido been abuur ah iyo booqashooyin web ah, oo ka dhigaya macluumaadka ku saabsan gaadiidka aan sax ahayn. Waxaa lagama maarmaan ah in dadka laga saaro spam u gudbinta maadooyinka Google Analytics. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa booqashooyin websaydh oo badan oo ka yimid domains sida Darodar ama Ilovevitality.
Spam Google Analytics waxaa ku jira booqashooyin kasta oo websaydh kaas oo u yimaada website-kaaga oo ka soo jeeda meelo kale - nuxellence eye area. Xaaladaha qaarkood, qaar ka mid ah boggaga aad dib u soo celisay waxay sababi karaan gaadiid been abuur ah. Bogga spam wuxuu noqon karaa labada nooc ee soo socda:
Xawilaadaha Ghost: Meesha iyo bogagga qaar ayaa laga yaabaa inay galaangal ku yeeshaan Google Analytics UAID. Waxay diiwaan galiyaan booqashooyinka boggaaga GA eeaga. Si kastaba ha ahaatee, maaha inay ka turjumaan booqashada webka ee ku yaal khariidadaada internetka. Waxay u muuqdaan inay yihiin booqasho aan caadi ahayn oo ku saabsan xisaabtaada GA.
Spam bots: Xaaladaha qaarkood, kuwa aan booqashada ahayn aadanaha ayaa riixi kara xidhiidhada boggaaga. Dhab ahaan, kuwani maaha booqasho websaydh sharci ah.
Sababaha ka dambeeya google analytics spam
Ku-dhaqanka xaasidnimo Sida weerarrada internetka ee caadiga ah, shakhsiyaadka waxay ku hayaan macluumaad nacfi ah oo ku saabsan boggooda tartanka. Waxay sidoo kale samayn karaan dambiyada qaar sida xatooyada kaararka ama xitaa xatta aqoonsiyada login. Keyloggers waxay fududeyn karaan dambiyada sida xadida macluumaadka maaliyadeed.
Soo-booqdayaasha soo-booqdaha Xaaladaha qaarkood, weerarradan waxay bartilmaameedsanayaan dadka ku wareejinaya bogag kale. Waxay ka tirsan yihiin hay'adaha SEO-ka ee madow oo ku ballanqaadaya natiijooyinka rikoodhka degdega ah waqti gaaban. Waxay u muuqdaan inay u adeegsanayaan booqashooyinka bogagga ama boggaaga, laakiin ha u beddelin iibka.
Iibinta wax soo saarka Badankood ee booqashada spam ee Google Analytics waa shirkado doonaya inay wax iibiyaan. Markaad malaayiin macaamiil ah ku dhex mari lahayd adduunka, waxay rajeynayaan in hal qof loo beddeli doono iibka. Ugu dambeyntii, waxay ku dhammaanayaan in aad naqdiyaan macluumaadkaaga taraafikada marka ay isku dayayaan in ay iibsadaan.
Sababta iyo sida loo xaliyo Google Analytics spam
Booqashada websaydhka spam waxay boggaga internetka ku dhib qabtaa in helitaankoodu ku salaysnaado istiraatiijiyada suuqgeynta internetka. Xaaladaha intooda badan, waxay u muuqdaan inay keenaan macluumaad aan ku xirneyn sida ay ganacsigaagu ujiraan internetka. Dadka intooda badan, isticmaalka faylasha spam ee Google Analytics admin tab ayaa xallin kara weerarada spam ugu badan. Tusaale ahaan, saamiga spam sida Darodar waxay heli kartaa qaladka 403 taasoo micnaheedu yahay inaysan haysan awoodda si aad u aragto website-kaaga. Shaandhaynta spam waxay u muuqan kartaa inaad ka dhigto boggaaga bilaash ah spam. Xaaladaha qaarkood, dadku waxay ku dhejiyaan codes ama faylka .htaccess oo ku saabsan xididka domain. Faylashaasi waxay xakameyn karaan kuwa guurguurtay websadaha sida kuwa xayeysiinta spam.